Mujaahidkii Qaadey Koobka Mujaahidiinta Geeska ee Taalada sawirka kurkiisa lagu xardhay Mapka Gobolka Awdal iyo cadeymahan soocan !!
Wednesday March 13, 2019 - 11:40:17 in Articles by Hadhwanaag News
Waayaha Sooyaalkaiyo sadarada taariikhdaayey dabcigeeda tahayxuquuq ahaan inaaney qarin shakhsiyaadka iyogeesiyada leh hibadaiyo sifaha tamarxarxiska illeyskiisu weynaado;isla mar-ahaantaana kataga mahadhooyin toganama taban ootirsiga Aadamaha daliyo deegaan aytahayba qiime iyoqaayaba gardaadinta guulahoodu ayku muunad iyomidabeysanyihiin ; garasho iyogarwaaqsi kadib cidkasta oo uxigto tirsata geesigauu yahay iyoguulihiisaba waxa farallaabta ay usii deyso kunoqda bulshooyinka badankoodau sameynta astaaniyo taallo laguxasuusto cufka iyoculeyska uu geesigaasiu leeyahay bulsho kasta.
Sida Quraanku inoocadeynayo ragaasi faroku tiriska ahee soo gaadhaydarajo iyo heerkaliftay in taariikhduxusto waxa kamid ah:
1. Taallo laguxasuusto darteed raggaasidhismaha masjidkii loodhisay asxaabal kahfigiisida ku xusansuuratul kahf , eeay u dhiseenraggii mulkiyey talladadeegaankii ay yaaleendhalinyaradaasi.
2.Taallooyin lagu xasuustodarteed Sannabadii loosameeyey raggii lakala odhan jiray( Laate , Cuze iyoManaate ) waasida uu quraankuba xusaye e’ragii saalixiinta ahaaee ku caanbaxay sama-falka tabarucaah ee xujaajtaiyo musaafiriinta.
3. Taariikhdan casrigaah ragga uqalmey ee soogaadhey darajada heerkaah in taallooyinloo sameeyo sida( Abraham Lincoln ooah madaxweynihii mareykankadhexdiisa ka joojiyeyadoonsiga dadka madow )Joseph stalin kiiRussia , Europe , Africa iyodunida badankeed weyka taaganyihiin taallooyinka shakhsiyaadka hirgaleysi lamid ah dhankasomalida taalladii sayidmaxamed cabdaleee xamar kutaaley imikana magaaladaJigjiga dhawaan lagataagey.
4. Taallo dhamaanteedwaxa isku fuuqsaday( taallada sawirkakurka koobka sitaee ku xardhan soohdimaha amaxariiqaha xadka mapkaGobolka Awdal ooah Kurka Mujaahidkiiweynaa Siciid Daa’uudCali oo sitakoobka horyaalka mujaahidiinta geeskaafrika ) cida sidanugu xaradhay xariiqahamaapka gobolka mujaahidkan waaillaaladii ingiriiska eedalka inla joogtaykadib markii ayka heleen magaaladaMakka Al-mukarama iyoDalka Masar xogtamujaahidkan oo tafatiran islamarkaana ay garwaaqsadeen xaqaiyo xuquuqda xasuusreeb ee uumudanyahay mujaahidkan koobkasita !! sida uutibaaxayo qoraagii gaarkau ahaa boqortooyada ingiriiskaee la odhanjiray ( I.M.LEWS ); mudaneakhriste xaqiiqo kaadahsooneyd waxa sifiican kuugu fasirayamacnaha iyo malahauu u taaganyahayqaab dhismeedka mapka Awdal ooah kur koobsi ta ;kurkaasi oo eegaayadhanka jihada Ethiopiaoo ah jihadiiay loolan iyojihaadka ugu hawl-gali jirtayBoqortooyadii ADAL eeXarumaheeduu soo kalahaayeen Saylac iyoHarar 1240-1880; dhankakoobka aan sheegayo :akhriste markale milicsigabogashada iyo eeg-madaii amaahi adigaoo si deganugu fiirsanaya islamabka Awdal dhexdiisaMabka Degmada Boramawaxa hubaal kuumuuqanaya qaabka degmadaBorama u sawirantahay inay tahayKOOB ku dhexnashqadeysan kurka Mujaahidka,KOOB kaasi waxauu kuu sheegayaaqaadista koobka Mujaahidiinta iyohoryaalnimadooda.
Waakuma Mujaahid SiciidDaa’uud Cali CumarWalishamasi?
Waaimamkii ama abaan-duulkii ciidankaBoqoqtooyadii Adal , islamarkaana qaabilsanaa fidintaxukun iyo talladaboqortooyada oo baryahaaku koobneyd magaaladaSaylac iyo duleed keeda balseku fidiyey xukunkaiyo tallada isagaoo adeegsanaya awoodciidankiisii iyo furashada guulodagaal oo uuku gaadhsiiyey xukunkaillaa gobolada koonfurta itoobiyaee ( Daawa ,Bali iyo Dawaro ) ; sidauu ka markhaatikacayo qoraagii khaaskau ahaa Boqortooyada ingiriiskaiyo daraasad rasmiyakadib qoraayada Jamacadakaambiriij,ee uu kamidyahay (Ronald Oliver)Buugiisa layidhaa (The Cambridge History of Africa, Volume 3 )page 153.
Fiiro gaar aheray bixinta ImamAli Si’id :
Qof ahaanin badan ayaanisweydiiyey sababta dadbadan oo soomaaliah waliba reerSomaliland ah markaqof loogu yeedhayomagaciisa inta badanloogu yeedho magacaawoowgii iyada oolaga boodayo magaciiAabbii? Baadhitaan iyoraadco dheer kadib waxa ayiiga soo dhexbaxday ( Suratul Yusufmar aan akhrinaayey) mudane akhristebal si deganu akhri oou dhabo galsuuragul yuusuf waxaaad heli doontaasadarada aayadaha horeiyo dhexe nabiyuusuf oo tirinayamagacyada Aabbayaashii ibraahim, isxaaq iyo yacquub,waxa aad fahmidoontaa habdhaqanka magacakhrisku in uuhalkaasi ka asal-qabodunida oo dhaninta ku abtirsatadiimaha ibraahiimiyada .
Halkan sidasaxda ah waaImaam abu Samaroon Siciid Daud Cali Cumar Walishamasi ; balseProfessor kan oo ah British habka ama qabka magacdana u isticmaala sida reer galbeedka ee ah first and after name or family name oo ah in qofka magaciisa iyo magaca awowogi ama famliga la qoro oo laga boodo magaca aabaha dhalay aya Waxa uu u qoray magaca imaam Siciid sida tan "Imaam Ali Si’id” ha se ahatee halka danbe aya Waxa uu sharaxaad Ka sii bixiyay inu yahay awawga ay Gadabuursigu Ka so jeeda wa sida uu English ugu qoray